Mampiseho ny Lanonana Fampihavanana ao Kolombia fa ny Vahoaka no Mametraka ny Fihavanana, Fa tsy ny Fifanekena · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Desambra 2016 8:03 GMT
“…”…Mandroso izahay; amin'ny maha vahoaka, mamela heloka ireo izay nanao zava-dratsy marobe taminay izahay […Saingy] aza hadinoina [ireo niharam-boina hafa] eto izahay misolo tena azy ireo […] andeha isika rehetra handray anjara hametraka fihavanana, handeha hanao izany ny tsirairay, mila firenena mangarahara sy tafala amin'ny kolikoly isika. “Sary nozarain'ilay mpisera JassGo tao amin'ny Pixaby. Azon'ny rehetra ampiasaina”.
Ity lahatsoratra ity dia dika nasiam-panovana tamin'ny lahatsoratra orizinaly nosoratan'i Tom Power, mpiara-dia avy ao amin'ny FOR Peace Presence ao Kolombia, izay nanatrika ny hetsika. Nasiam-panovana ny lahatsoratra rehefa nahazo alalana avy amin'ny mpanoratra sy ny fikambanana, izay namoaka ny lahatsoratra tany am-boalohany tao amin'ny tranonkalan'izy ireo.
Andro vitsy talohan'ny latsa-baton'ny firenena izay nitsipaka ny fifanekem-pihavanana, tonga tao amin'ny faritra avaratra indrindra ao amin'ny firenena, Oalan'i Uraba, ny roa malaza indrindra tamin'ireo mpitarika ady anaty akatan'ny FARC, Ivan Márquez sy ny Pastora Alape mba handray anjara amin'ny lanonam-bahoaka ho fankatoavana ny famelan-keloka, araka ny nangatahan'ny Fikambanan'ny Lasibatra tao amin'ny Kaominina Apartadó nandritra ny fifampiraharahana.
Tongotra an-katoka ny an'ny vahoaka, nifanosika hijery an'i Márquez sy i Alape rehefa hiakatra ny sehatra ireo olona voatonona ireo. Natrehin'ny olona maherin'ny 500 ny lanonana. Nipetraka nilahatra teo anoloana ny fianakavian'ireo niharam-boina 35 tao La Chinita miaraka amin'ny t-shirt mivaky hoe “Sí perdonamos” (tsy maintsy mamela heloka isika) , miandry amim-pitaintainana izay holazain'i Ivan Marquez:
Amin'ny maha-fikambanana, firaisambe, mankatoa ireo olona tsara marobe tsy afaka nanatanteraka ny nofinofin'izy ireo izahay […] ny fahafatesan'i La Chinita dia fahafatesanay ihany koa […] Te hametraka fifandraisana indray isika. Ao am-po ny fihavanana; handeha hanorina hoavy miaraka amin'ny fanantenana isika, handeha hiady isian'ny zo, fiovana ary ny fanovana tanteraka isika.”
Tanàna sarangan'ny mpiasa ao Apartadò i La Chinita, fantatra ho Barrio Obrero (Tanànan'ny Mpiasa), manana mponina eo amin'ny 35000 ho eo. Tamin'ny fiandohan'ny taompolo 1990, nanomboka nanorim-ponenana teo ankilan'ireo mpiady anaty akata taloha tao amin'ny EPL efa rava (Tafi-panafaham-Bahoaka) ireo mpiasan'ny fambolena akondro ao an-toerana izay mikasa hiditra ao anatin'ny fiarahamonim-pirenena. Nomen'i La Chinita azy ireo izany.
Noho ny fiverenan'ny EPL tao anatin'ny dingana ara-politika ara-dalàna, nanangana ny Esperanza, Paz, y Libertad (Fanantenana, Fandriampahalemana ary Fahafahana) izy ireo—antoko politika nifandray tsikelikely tamin'ny rafitra ara-politika sy ara-pihariana tao Apartadò—fifandraisana izay tsy azo ihodivirana fa mifanohitra amin'ny hetsika ara-politikan'ny FARC, ny Union Patriótica (Firaisankinam-Pitiavantanindrazana). Na dia sokajiana ho “ankavia ara-potokevitra” aza ny roa tonta, dia nahatonga ireo antoko ara-politika roa hifanavaka ny zava-misy amin'ny fifehezana ara-pizarantany, ny fahefana ara-politika ary ny tombontsoa ara-toekarena. Tsy nitarika ho any amin'ny tolona ara-politika milamina, fa nitsontsorika nankany amin'ny fiverimberenan'ny herisetra mahatsiravina ny fiharoharoan'ny mpitantan'ny orinasa fambolena akondro, ny politisiana ary ny sehatry ny fiangonana, sy ireo hevitra samihafa sy maodelim-pampandrosoana ara-toekarena isan-karazany.
Na dia nihahenjana aza ny toe-draharaha politika tao amin'ny faritra dia nivelatra ny manodidina an'i La Chinita. Tamin'ny faha-23 Janoary 1994, nifamory tao amin'ny lanonana iray tao an-toerana ny mponina hanangom-bola hanamboarana ny sekoly manodidina. Tao anatin'ny lanonana indrindra, niditra tsy nanambara tena ny lehilahy mitam-piadiana manana fitaovam-piadiana ara-miaramila ary nanomboka nitifitra. Tao anatin'ny fitifirana, nisy nihiaka hoe, “Aza vonoina ny zaza amam-behivavy, ny lehilahy ihany!”
Raha nilaza ny FARC fa noheverin-dry zareo ho feno mpiadin'ny EPL efa tsy nahetsika hiady intsony ny lanonana, dia roa tamin'ireo 35 maty voatifitra tamin'io fotoana io ihany koa mpiady anaty akata taloha. Ny marina, mpiasan'ny fambolena akondro ny ankamaroan'izy ireo, ary misy ny tsy ampy taona, zokiolona iray, ary vehivavy iray. ny toe-javatra mampalahelo tamin'ny fifandirana kolombiana dia ireo tsy miditra loatra tamin'ny zavatra iadiana no tena nianjadian'ny ady.
Ny lanonana Septambra no fotoana voalohany niaiken'ny FARC ampahibemaso ny andraikitr'izy ireo tamin'ny vono olona, rehefa nandà ny fandraisana anjara tamin'izany nandritra ny roapolo taona. Na izany aza, fanombohana ihany ny endrika saimbôlika tamin'ity lanonana ity. Teboka efatra no navoitra nandritra ny lanonana izay anantenana hanatanterahan'ny governemanta ny anjara andraikitry ny Fanjakana sy ny fanonerana: ny fananganana Oniversiten'ny Fihavanana, mozea ho fanomezam-boninahitra ireo niharam-boina, foibe ara-tsosialy sy ara-piarahamonina, ary fanomezana fonenana ireo niharam-boina. Araka ny nolazain'ireo mpitarika ara-piarahamonina iray taorian'ny fanasongadinana ireo teboka ireo tamin'ny fandraisany fitenenana.
Fihavanana no ilaintsika eto ary handeha hanorina izany isika. Manao fanamby amin'ny fananganana fihavanana isika.
Fahatsiarovana ny herisetra sy ny famoizana
Afaka nampiseho ampahibemaso momba ny vono olona ihany koa ireo niharam-boina hafa, tahaka ny mpikambana iray ao amin'ny fiarahamonina namoy ny rainy
Tsy maintsy manampy an'ny mama izahay hiavotan-tena, nanirery tanteraka izahay […] Ary noho izany fotsiny, tsy nisy intsony ny fotoana hilalaovana, tsy maintsy miasa izahay, tsy maintsy nanalehibe tena izahay. Tsy mora ny manao veloma noho ny feony, ny tsikiny, ny fanatrehany…
Niresaka momba ny fahasahiranana natrehiny tamin'ny fikarakarana ny zanany ny niharam-boina iray maty vady, ahoana ny fomba nifanohanana sy nifanampian'ny vehivavy hafa maty vady, ary nampahatsiahy ny isan'ireo niharam-boina tao Urabà sy manerana an'i Kolombia ihany koa tamin'ny tsirairay izany :
… Niroso izahay, amin'ny maha olombelona, mamela heloka ireo izay nanao ratsy betsaka taminay izahay […Saingy] aza adinoina [ireo niharam-boina hafa], teto izahay noho izy ireo […] andeha isika rehetra handray anjara hametraka fihavanana, hanao izany ny rehetra, mila firenena mangarahara sy afaka amin'ny kolikoly isika.
Tanelanelan'ny fieritreretana fitiavana sy famoizana, nanasongadina ny aretina ara-tsosialy mbola mamely azy ireo ihany koa ny lasibatra: “[…] eto isika miatrika fifandirana sy fialàn'ny fanjakana andraikitra izay nahatonga ity vono olona ity hitranga”, hoy ny niharam-boina iray maty rahalahy. Raha ny amin'ny raharaha iray izay nampandoavan'ny governemanta federaly Amerikana onitra 25 tapitrisa dolara ny orinasa mpamokatra voankazo marika Chiquita (nantsoina taloha hoe Untied Fruity Company) noho ny fifandraisany tamin'ireo vondrona milisy, nilaza izy: “tokony misy ny dingana hitsinjarana izany vola izany eo amin'ireo niharam-boina, tsy ny niharam-boinan'i La Chinita ihany, fa izay rehetra lasibatra.”
Niaiky i Sergio Jaramillo, tompon'andraikitra Ambony misahana ny Fampihavanana ao Kolombia, fa nandray andraikitra ny FARC, ary nanaiky ny tsy fahampian'ny fandraisan'andraikitry ny fanjakana. Nanamarika ny fandaozan'ny fanjakana an'i La Chinita izy. ny fifandraisana ara-tantara teo amin'ny fanjakana sy ny milisy, vondrona mitam-piadiana tsy ara-dalàna an'ny elatra farany ankavanana ho tompon'andraikitra tamin'ny herisetram-pankahalana sy fanorotoroam-batana, ary nanaiky ny fandripaham-bahoaka tamin'ny filazana hoe: “Manantena izahay fa ho famantarana izy ity fa matotra amin'ny fampihavanana ny fanjakana sy ny FARC. “
Ho an'ireo sehatra ara-piarahamonina Kolombiana manantena mafy ny tsy fanetsehana intsony ireo vondrona mitam-piadiana hiady sy ny fanombohan'ny fananganana fihavanana, ny fitsipahana ny fifanekena ara-pihavanana no nampiseho ny fahasarotana lalin'ny ady ao amin'ny fiarahamonina Kolombiana ary nahatonga ny sasany handinika ireo fanovana marobe ilaina ho fananganana fihavanana mivaingana sy mijoro.